Maltese Shih Tzu Mix မွေးမြူရေးသတင်းအချက်အလက် - Breeds
Maltese Shih Tzu Mix မွေးမြူရေးသတင်းအချက်အလက်
Maltese Shih Tzu (Malshi ဟုလည်းလူသိများ) သည်ချစ်စရာကောင်းသောသေးငယ်သော pomom ဖြစ်သည်။ ပိုမို၍“ ဖြေလျော့ပေးခြင်း” မိသားစုဝင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအဖော်။
ဒီဇိုင်းဆွဲခွေးမျိုးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော hypoallergenic Maltese ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမွေးဖွားလာသည်။
Shih Tzu Maltese သည်ချစ်ခင်ကြင်နာမှုရှိသောသားပေါက်တစ်မျိုးဖြစ်ရုံမက၎င်းတို့သည်လည်းဆော့ကစားနိုင်ပြီးအလွန်လိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်နိုင်ပြီးမတူကွဲပြားသောဘဝပုံစံများ (ဥပမာ - ငယ်ရွယ်။ တိုးတက်သောမြို့နေဘဝနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောဆင်ခြေဖုံးဘဝများ) နှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။
ဒီဒီဇိုင်နာကစားစရာမျိုးစိတ်ဟာအရင့်အမြင့်ရှိပြီး ၁၂ လက်မနဲ့အလေးချိန် ၁၂ ပေါင်ရှိတဲ့ကစားစရာခွေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ သူတို့မှာနှုတ်ခမ်းတိုလေးတစ်ခုနဲ့ခေါင်းလျှော်တဲ့ပျော့ပျောင်းတဲ့အင်္ကျီတစ်ထည်ရှိတယ်။
Maltese Shih Tzu အချက်အလက်
အသင့်တော်ဆုံး သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ဂရုတစိုက်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်မိသားစုထဲမှအနည်းငယ်မျှသာပါ ၀ င်သည်။
အရွယ်အစား ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက် 12″ အထိ
အလေးချိန်6မှ 12 ပေါင်
သက်တမ်း 12 - 14 နှစ်
အရောင်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်အသားများနှင့်အတူပေါင်းစပ်နှင့်အတူအဖြူ, အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်
လှုပ်ရှားမှုအဆင့် အနိမ့် - တစ်နေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်ရုံဖြင့်လုံလောက်သည်
နေ့စဉ်စားသုံးမှု အရည်အသွေးမြင့် kibble ၏ ၁/၂ ခွက်အထိ
လူသိများသောကျန်းမာရေးပြuesနာများ Brachycephalic အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊ White Shaker Syndrome, Patellar Luxation
Maltese Shih Tzu မွေးမြူရေးသတင်းအချက်အလက်
Maltese Shih Tzu ခွေးပေါက်စ
Maltese Shih Tzu အသွင်အပြင်: Coat, Color and Haircuts
Maltese Shih Tzu ဖြီးလိမ်းပုံ
Maltese Shih Tzu ကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးသောမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသည်။ pet နှင့် hypoallergenic Maltese ခွေးနှင့်လိမ္မာပါးနပ်သော spihy Shih Tzu ။
မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည်တူညီသောအရွယ်အစားရှိသောကြောင့် sire နှင့် Dam သည်အပြန်အလှန်လဲနိုင်သည်။
မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည်ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးမှဆင်းသက်လာကြသော်လည်း (မြေထဲပင်လယ်မှမော်လ်ဒိုက်နှင့်အာရှမှရှီဇူး)၊ Maltese Shih Tzu ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပထမဆုံးမွေးဖွားခဲ့သည် ။
Maltese ခွေးနှင့် Shih Tzu ခွေးကိုရောနှောရန်ဟူသောအယူအဆမှာမသွန်းလောင်းနိုင်လောက်အောင်ချစ်စရာကောင်းသောအဖော်လေးကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ အများကြီး Shorkie ၏တူ ။
အကယ်၍ သင်သည် Pretty Little Liars ဝါသနာရှင်ဖြစ်လျှင်သင်သိလိမ့်မည် အက်ရှလေ Benson ဤအဒီဇိုင်နာ hybrids တွေထဲကရှိပါတယ်။
Shih Tzu maltese ကိုဘယ် kennel club မှအသိအမှတ်မပြုပါဘူး။
အမှိုက်သရိုက်များသည်အရွယ်အစားခွေး ၆ ကောင်မှ ၈ ကောင်အထိရှိသည်။ သူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြောင့် ဒီဟာကြီးမားတဲ့အမှိုက်သရိုက်အရွယ်အစား အမှိုက်သရိုက်တစ်ခုချင်းစီသည်အရောင်နှင့်ထူးခြားသည်၊ ဒီဇိုင်နာ hybrids များကဲ့သို့ဖြစ်သဖြင့်အမှိုက်သရိုက်များသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များစွာပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အတွက်အမှိုက်သရိုက်များသည်မည်သည့်အရာကြည့်မည်ကိုအတိအကျမပြောနိုင်ပါ။
ရှီတီဇူးဈေးနှုန်းသည်ကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀ မှ ၈၀၀ ကြားအတွင်းရှိပြီးသင်ဝယ်ယူသောမျိုးဆက်အပေါ်မူတည်သည်။
ခွေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားခြင်းသည်အမြဲတမ်းကြောင့်သင်ကကယ်ဆယ်ရေးဌာနတစ်ခုတွင်ရှာဖွေရန်သင့်အတွက်ကံကောင်းလိမ့်မည် နှလုံးပူနွေးစေသော option ကို ။
Maltese Shih Tzu ရဲ့သက်တမ်းကဘာလဲ။
ဤခွေးသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၂-၁၄ နှစ်ခန့်နေထိုင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်ငယ်ခွေးဖြစ်သည့်အတွက်သင်အတူတကွနှစ်စဉ်ကျင်းပသောနှစ်ပတ်လည်တန်ဖိုးကိုသင်ကျိန်းသေသဘောပေါက်လိမ့်မည်။
Maltese Shih Tzu ဘယ်လောက်ကြီးပြီးအရွယ်ရောက်လာသလဲ။
ဒီကစားစရာခွေးဖောက်ကြောင်းသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်၊ နှစ်လအရွယ်ပြီးနောက်သင်၏ခွေးကလေးသည်ကြီးထွားမှုသိပ်မရှိပါက (အောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်ပါ) ။ ခွေးနှစ် ဦး စလုံးလိင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတူတူပင်အရွယ်အစားဖြစ်ကြသည်။
ခွေးပေါက်စ (၂ လ) ၇ လက်မ ၄ ပေါင်
ခွေး (12 လ) ၁၀ လက်မ6- 12 ပေါင်
Maltese Shih Tzu ဟာအရမ်းကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။ တကယ်တော့သူတို့ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတောင့်တပြီးသင်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်၊ ကြိုက်တယ် အခြားမောလ်ရော၊ အဆိုပါ Morkie ။
သူတို့သည်အလွန်ကြီးမားသောစိတ်ထားရှိပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာလုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်ရှိပြီးသင့်ကလေးတွေကိုအလုပ်များစေနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကလည်းပျော့ပျောင်းလွန်းလို့အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်၊
သူတို့ကယုံကြည်မှုရှိနိုင်တယ်၊ တခါတရံသူစိမ်းတွေကိုသံသယဖြစ်တတ်တယ်။ သူတို့သည်သူစိမ်းများကိုစနစ်တကျမိတ်ဆက်ခြင်းမပြုသောအခါ၊ သူတို့ကအနည်းငယ် feisty ပြုမူလိမ့်မည် ။
Shih Tzu Maltese ဟာသူတို့လိုအပ်တဲ့အာရုံစိုက်မှုအားလုံးကိုရရှိဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ သင့်တော်သောဂရုစိုက်မှုနှင့်ချစ်ခင်မှုမရှိပါကဤဖောက်သည်သည်ပျင်းလာပြီးစိတ်ဓာတ်ကျနိုင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်အဖျက်နှင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
စကေး၏သေးငယ်တဲ့အဆုံးအပေါ်ဖြစ်ခြင်း, မောလ် Shih Tzu ကတကယ်တော့ဒီလောက်များများစားစားမလိုအပ်ပါဘူး ကျန်းမာအားရစရာရန် ။
သင်၏ခွေးကလေးသည်သင်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Malshi ထက်တစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီပိုမိုလိုအပ်လိမ့်မည်မှာအံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်ပေလိမ့်မည်၊ သို့သော် ဒီလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Maltese Shih Tzu သည်တစ်နေ့လျှင်ခွေးခြောက်သွေ့သောခွေးအစားအစာတစ်ခွက်ခန့်လိုအပ်သည်။ ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာသင်၏ Malshi kibble ကိုအစာနှင့်ခွေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အစာကျွေးရန်ဖြစ်သည်။
ကံကောင်းတာကဒီမျိုးကွဲအဘို့, Shih Tzu Malteses အဝလွန်ခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့မရှိကြပေ သို့သော်သူတို့ကို Kentucky Fried Chicken နှင့် McDonalds တို့နှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ မည်သည့်တိရစ္ဆာန်နှင့်မဆိုခွေး၏အာဟာရနှင့်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောအစားအစာများကိုကျွန်ုပ်တို့မှီဝဲရန်အရေးကြီးသည်။ ဤသည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာနေဖို့သေချာ!
မည်သည့်ခွေးနှင့်မဆိုကဲ့သို့သင်၏ maltese shih tzu အစားအသောက်လိုအပ်ချက်သည်သူတို့၏အသက်၊ အရွယ်အစားနှင့်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်အရပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
ဤဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်ခွေးများကိုအလွန်အမင်းမတွန်းရန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းတို့သည်လူသိများသောဝေဒနာရှင်ဖြစ်သည် brachycephalic အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ထို့ကြောင့်အလွန်အကျွံအားစိုက်ထုတ်ခြင်းကအသက်ရှူရခက်ခဲစေနိုင်သည်။
ရိုးသားကြပါစို့၊ မည်သည့်ခွေးတစ်ကောင်မှကောင်းမွန်သောကြီးမားသောခြံဝင်းထဲသို့ပြေးဝင်ရန်ငြင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် Maltese Shih Tzu အတွက်ခြံကြီးတစ်ခုမလိုအပ်ပါ။ သူတို့ဟာတိုက်ခန်းလိုသေးသေးလေးတစ်ခုမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်ရဟုမဆိုလိုပါ။
သူတို့ကကြမ်းတမ်းသောသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ် (သွက်လက်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်သည်သောဥပမာ - နွားမွေးမြူရေးခွေး) မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော်၎င်းတို့သည်နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်ကြာလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုလမ်းလျှောက်ရန်မျှော်လင့်သင့်သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချို့ဂိမ်းများကိုအသုံးပြုရန်သင်ကြည့်သင့်သည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြံပြုချက်များကိုကြည့်ပါ) ၎င်းတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုဘဲဖျော်ဖြေမှုများပြုလုပ်ရန်ကူညီပေးပါသည်။
ထိပ်တန်း - သိကောင်းစရာ
စူးစမ်းရှာဖွေသူအနည်းငယ်ဖြစ်လိုသည့်အတွက် leash ကိုအသုံးပြုရန်သတိရပါ။ Malshi သည်အလွန်ထက်မြက်သောကြောင့်၎င်း၏အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေရန်အမြဲစိတ် ၀ င်စားသည်။
Maltese Shih Tzu ဟာအရမ်းကိုဥာဏ်ကောင်းတဲ့ crossbred dog ဖြစ်တယ်။ ဤသည်သင်တန်း၏အချို့သောရှုထောင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်; သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ခွေးကလေးပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံသောဝိသေသပါ!
မည်သည့်ခွေးကဲ့သို့ပင် Malshi လိုအပ်သည် အပြုသဘောအားဖြည့်လေ့ကျင့်ရေး ။
မည်သည့်ခွေးကိုမဆိုအလွန်အကျွံဖျက်ဆီးခြင်း မကောင်းသောအပြုအမူဆိုင်ရာအလေ့အထများ (ဥပမာပျက်စီးခြင်းနှင့်ဟောင်ခြင်း) သို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်ကလေးအားအလွန်အကျွံကလေးမွေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတိထားပါ။
Maltese Shih Tzu ဟာသူစိမ်းတွေပတ် ၀ န်းကျင်မှာစိတ်ဆင်းရဲမှုလက္ခဏာတွေပြသဖို့လိုတယ်။ သို့သော်ဤအချက်သည်လူမှုရေးအရမဖြစ်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ကြီးစွာသောလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ခွေးပန်းခြံများသို့သွားခြင်း၊ ရပ်ကွက်ပတ် ၀ န်းကျင်အနည်းငယ်သာလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ခွေးဖော်ရွေသောကမ်းခြေသို့အနည်းငယ်သာခရီးများပါ ၀ င်သည်။
အကြံဥာဏ်များအတွက်လိုပါသလား သင်၏areaရိယာရှိဂူဂဲလ်ခွေးနှင့်သင့်တော်သောနေရာများနှင့်သင် Malshi ကိုယူရန်အေးမြ။ မတူညီသောနေရာများကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။
ရိုးရှင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်သင်၏သေးငယ်သော Malshi အတွက်လုံလောက်သည်။ သူတို့တကယ်လိုအပ်တာကသင်သူတို့ကိုဂရုစိုက်ပြီးချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရန်ဖြစ်သည်။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဝှက်ထားသောကစားနည်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏ Malshi နှင့်အတူပြေး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာပါ။ သူသို့မဟုတ်သူမနာမည်ကိုခေါ်ပြီးသင့်ကိုကြိုးစားရှာပါ။ ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်သင်ခိုးထွက်ပြီးပုန်းခိုရာနေရာအသစ်များကိုစမ်းကြည့်ပြီးသူတို့၏နာမည်ကိုထပ်ခေါ်နိုင်သည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ သူတို့သည်သင့်ကိုရှာရန်ကြိုးစားနေကြလိမ့်မည်။
မှတ်မိဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကသူတို့တစ်ယောက်တည်းနေရင်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တာပါပဲ။ သူတို့ကအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ် ခွဲခြာစိုးရိမ်ပူပန်မှုကနေခံစားရတယ် ။ သင်၏ချစ်ခင်စုံမက်မှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးဒီပေးထားသည်ထို့နောက်သင်နှစ် ဦး စလုံးအဆင်ပြေဖြစ်သင့်သည်။
Maltese Shih Tzu ဆိုတာမျိုးစပ်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။ သူကပေါက်ဖွားလာတဲ့မိဘတွေမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းချက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပေါက်ခဲ့တယ်။
သို့သော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်ဤအရာသည်အမြဲတမ်းဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိသောကျန်းမာရေးပြissuesနာများနှင့်ရောဂါများရှိနေသေးသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်၏ Malshi ကလေးငယ်၏မည်သည့်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအတိုချုပ်သင်သိချင်လိမ့်မည်။
Brachycephalic အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ အများအားဖြင့်ခွေးများတွင်ခေါင်းနှင့်မျက်နှာအသွင်သဏ္shapeာန်တူ။ နှာခေါင်းနှင့်နှာခေါင်းပုံသဏ္irregာန်တိုခြင်းကိုတိုစေသည်။ ၎င်းသည်အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအလွန်အကျွံအားစိုက်ပါကအသက်ပြင်းပြင်းရှူပါလိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာ Malshi အတွက်မိဘမျိုးဆက်များဖြစ်သော Maltese နှင့် Shih Tzu နှစ်မျိုးလုံးသည်ဤရောဂါကိုမျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေသော Maltese ရှိရှီတီသို့လွှဲပြောင်းပါ။
White Shaker Syndrome များစွာသောခွေးများတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ဒီရောဂါဟာခွေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမမျှော်လင့်ဘဲလှုပ်ခါစေပြီး ဦး နှောက်ထဲမှာရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်။ တခါတရံပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏ခွေးကိုအအေးမိခြင်းကြောင့်လှုပ်လိုက်ခြင်းကိုမှားယွင်းနိုင်သည်။ သို့သော်တုန်ခါမှုဆက်ရှိနေပါကသင်၏ဒေသခံတိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်။
Patellar Luxation များစွာသောခွေးများအတွက်ဘုံအရိုးပြproblemနာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကသင်၏ခွေး၏ဒူးကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းစေနိုင်သည် ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီအခွအေနေအသေးနဲ့ကစားစရာအမြိုးမြိုးမှာဘုံပါပဲ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာသို့မဟုတ်အဆက်မပြတ်စိတ်ဖိစီးမှုခွဲစိတ်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ pom pom နဲ့တူဆိုတဲ့အချက်ကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးတိကျတဲ့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ Maltese Shih Tzu ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။
၎င်းတို့၏အင်္ကျီများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရှည်လျားပြီး (ပိုင်ရှင်များကသူတို့ကိုခေတ်မှီသောဆံပင်ညှပ်များပေးလေ့ရှိသော်လည်း) ဖြောင့်ဖြောင့်သို့မဟုတ်လှိုင်းများသည်။
ထူးခြား, သူတို့မကြာခဏ undercoat ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဒီခွေးသွန်းလောင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်အထူးရပ်ကြီးခဲ့သည်။ အချို့သွန်းလောင်းနေဆဲပေါ်ပေါက်ပါဘူးပေမယ့်။ ဤရွေ့ကားခွေး hypoallergenic (ဆိုလိုလျှော့ချသွန်းလောင်း) ဖြစ်လူသိများကြသည်ဒါကြောင့်လေဟာနယ်တာဝန်အပေါ်မည်သူမဆိုသင်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်!
သူတို့ရဲ့ကုတ်အင်္ကျီအရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့လာနိုင်ပါတယ်အဖြူ, အနက်ရောင်, အညိုရောင်သို့မဟုတ်အရောင်များပေါင်းစပ်။ ဥပမာအဖြူနှင့်အနက်ရောင်၊ အဖြူနှင့်အညိုရောင်၊ အညိုရောင်နှင့်အနက်ရောင် ... သင်ဆိုလိုသည်။
မျိုးဆက်ပိုင်ရှင်များသည်များသောအားဖြင့် Maltese Shih Tzu ဆံပင်ပုံစံကိုရွေးချယ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်နွေရာသီလများတွင်။ ဤသည်ကိုလည်းဖြီးလိမ်းပုံအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ pup ၏ဆံပင်ကိုချောချောမွေ့မွေ့ချောမွေ့စေလိုလျှင်၊ တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ရေချိုးခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်လက်သည်းညှပ်ဒဏ်ရာမရ။ ပြီးတော့သူတို့မျက်လုံးတွေသန့်ရှင်းနေအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့မျက်စိမှန်မှန်ပြီးတော့ဒီမသန့်ရှင်းပါ မျက်ရည်စွန်းတိုင်အောင် ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည် (မိဘဖောက်ခွဲလေ့များတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်, Maltese) ။
ဤချစ်စရာကောင်းသော၊ ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်သော၊ အသိဉာဏ်ရှိသောနှင့်ကစားစရာကောင်းသောဂုဏ်အသရေသည်မည်သည့်မိသားစုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်မည်သည့်နေထိုင်မှုအခြေအနေဖြစ်ပါစေအကောင်းဆုံးသောအဖော်ဖြစ်သည်။
သင်၏ maltese shzu tzu အားချစ်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်သူတို့အတွက်အချိန်များများပေးပါ။
အကယ်၍ သင်လည်းကြင်နာပြီးထွက်ပေါ်လာသော Maltese Shih Tzu ရှိသူတစ် ဦး ကိုသင်သိပါက၎င်းတို့သည်မည်မျှချစ်ခင်ကြပြီးချစ်ခင်ကြကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကြားလိုပါသည်။
၁၉ Terrier ရောနှောခြင်း - အပြည့်အစုံ A မှ Z စာရင်းအပြည့်အစုံ
ဒီပြောင်ပြောင်တောက်တောက်ရွှေရောင် retriever အရောင် ၄ ခုကိုသင်တွေ့ရမယ်
boston terrier နှင့် French bulldog ရောနှောသည်
အရွယ်ရောက်ပြီးသော chihuahua terrier ရောနှော
ဘယ်လ်ဂျီယန် malinois နှင့်ဂျာမန်သိုးထိန်းအရွယ်အစား